About Us - Hangzhou Poly Air Separation Equipment Co., Ltd
Hangzhou Poly Air Separation Equipment ManufacturingCo., Ltd dia matihanina mpanamboatra izay mamokatra fitaovana fanaovana PSA azota, oksizenina PSA manao fitaovana, VPSA oksizenina manao fitaovana, fitaovana fanadiovana Compressed rivotra etc.
Ny orinasa mitambatra ny R & D, famolavolana orinasa mpamokatra entana, sy ny varotra. mendrika ny toe-piainana tonga lafatra famokarana, fitaovana fametrahana, fanahafana, ny fikojakojana sy ny asa fanompoana. Izany ihany koa ny manakarama ny manam-pahaizana eo amin'ny sehatry ny vaovao ara-nofo sy ny ara-teknika injeniera thermodynamics toy ny mpanolo-tsaina mba hahazoana antoka fa ny vokatra sy ny ara-teknika dia foana ao amin'ny tsipika ny teknolojia sy hanome azo antoka sy ara-tsiansa antoka ny vokatra famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana. Sinopoly rivotra fisarahana dia lasa mpitarika ara-teknika eo amin'ny tsipika ny Compressed rivotra fanadiovana sy ny tsindry adsorption savily.
Company ny vokatra dia tena mizara ho: PSA azota (oksizenina) fitaovana, VPSA poto-oksizenina fitaovana, vacuum entona fanadiovana fitaovana, manify fisarahana azota (oksizenina) fitaovana, mandry fanamainana, madinika hafanana regenerative fanamainana, heatless regenerative fanamainana, hafanana regenerative fanamainana, sivana sy folo hafa andiana fepetra arahana. Products dia Nampiasaina be teo amin'ny solitany, Orinasa, herinaratra, simika orinasa, mpampatsiro hanina orinasa, arintany TAOZAVA-BAVENTY, fanafody orinasa, aerospace, fiara orinasa, plastika orinasa, simika fibre, fingotra, fitaratra orinasa, sakafo orinasa, elektronika orinasa sy ny aquaculture sy ny saha .
Company no misy in Fuyang Gaoqiao Industrial Park, mifanila amin'i Hangzhou West farihy, Fuchun renirano, farihy sy ny Qiandao-pirenena hafa toeram-tombontsoa.
Company-pinoany: ny finoana tsara mitady ny toetra tsara ny fampandrosoana mitady ny marika, finoana tsara mitady ho amin'ny fanompoana.
Ny asa fanompoana-pinoany: mpanjifa fahafaham-po ny orinasa nanenjika ny mandrakizay!
Telefaonina: +86 571 6343 0099